Hwindo kurerutsa / maximizing dambudziko
kosha Hwindo kurerutsa / maximizing dambudziko
2 makore mwedzi 1 apfuura #316 by JanneAir15
Mhoro! Pandakamedurira kuderedza FSX hwindo (chiri pamusoro windowed muoti) uye ndinotarisira kuti chinhu asi zvino ndinoda kudzokera FSX uye ndichaita maximize hwindo asi ipapo zvose ndichaenda dema. Hapana kana pane dzimwe textures. Ndapota ndibatsireiwo pamwe ichi! Uyewo ndine dambudziko ichi chete pamusoro payware ndege (PMDG 777, Aerosoft Airbus chisote) uye Simulator ndiye FSX Yechipiri. Ndichaedza edza kuisa mamwe mifananidzo zvakare.
2 makore mwedzi 1 apfuura #317 by Gh0stRider203
Wandakamboda dambudziko iri kakati, pachangu. dzimwe nguva KANA Ini kushandura maonero, rinobatsira, kana kumirira vaviri maminitsi richafa kubvisa uzvivake.
2 makore mwedzi 1 apfuura - 2 makore mwedzi 1 apfuura #320 by Colonelwing
zuva Good na Janne ,,
It kuitika kwandiri PMDG B737NGX musi FSX Yechipiri GOLD uye pandakanga kushandisa Key AltGr to Pinda kuna shoma hwindo wangu Sim sikirini hwindo ,, nayo could'nt basa zvakanaka, dema nechidzitiro akaita seenyu. Asi kana ini kudarowo pamusoro hapana payware ndege ,, zvose kushanda hwakanaka inobuda.
Last edit: 2 years 1 mwedzi wapfuura ne Colonelwing.
2 makore mwedzi 1 apfuura #322 by JanneAir15
Chaizvoizvo Ndatova chavakagadzirisa ichi. Munhu ane dambudziko iri kuenda linked ichi: c-aviation.net/fsx-tweak/fsx-cfg-tweak-guide/
Kubva ipapo kukopa "UIAutomationCore.dll" uye wedzera "HIGHMEMFIX = 1" kusvikira fsx.cfg. Izvozvo zvakandibatsira. Unogona kuwana fsx.cfg forodha kubva% appdata% / Microsoft / FSX
2 makore mwedzi 1 apfuura - 2 makore mwedzi 1 apfuura #325 by Colonelwing
Good kubatana Info ,,, nokuti FSX
By chii sezvo anga panotaurwa panzvimbo iyoyo kubatana, kana iwe uri pamusoro FSX chiutsi iwe dont zvakakodzera vanoda faira ichi.
UIAutomationCore.dll - dll raibhurari faira anovandudza 32-chikumbiro waivako muna 64-ikakuruma hurongwa. Unofanira download nzvimbo yenyu huru FSX forodha kudzivirira OOM zvikanganiso (pakati vamwe). Kwete kwakakodzera FSX Steam Edition.
Time chokusika peji: 0.851 mumasekonzi